ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် - ဘူလ်ဂေးရီးယားမှအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူပါ။
သင်ကဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဘူဂေးရီးယား Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိပြီးတတ်နိုင်သောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်။
● Portfolio Management လိုင်စင်ကိုရယူပါ။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရရှိရန်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရရှိရန်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူရန်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက် Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အကြံပေးများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက် Portfolio Management လိုင်စင်အကြံပေးများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက် Portfolio Management လိုင်စင်ရှေ့နေများသည် Portfolio Management လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီနှင့်အတူဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Portfolio Management လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အခကြေးငွေ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုကြိုတင်ရရှိရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်လည်းသတင်းအချက်အလက်တွေပေးပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးလိုင်စင်ပေးသူဖြစ်ပါကလျှောက်လွှာကိုလက်ခံပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ ၁၀၀% အောင်မြင်မှုကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
သူတို့၏စီးပွားရေးကိုဥရောပသမဂ္ဂဈေးကွက်သို့ဗဟိုနှင့်အရှေ့ဥရောပစျေးကွက်များသို့ ဦး ဆောင်ရန်ရွေးချယ်သောလျှောက်ထားသူများအတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယားသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်ရအဖွဲ့အစည်းများ၏လုပ်ငန်းများကိုဘူလ်ဂေးရီးယားဘဏ္Financialာရေးကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင် (FSC) ကကြီးကြပ်ပြီး MiFID ညွှန်ကြားချက်နှင့်ဘဏ္Supာရေးကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်အက်ဥပဒေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားသည်အေဒီ ၂၀၀ ခန့်ဒေသတွင်း၌သက်သောင့်သက်သာရှိသောဘူလ်ဂေးရီးယားလူမျိုးများ၏အမည်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏အစတွင်ထိုဇုန်သည်ရှေးခေတ်သရက်မင်း၏ဘဝလမ်းစဉ်ဖြင့်အခြေချခဲ့သည်။ ၆၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်အဓိကဘူဂေးရီးယားပြည်နယ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ပထမ ဦး ဆုံးဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံတော်သည် ၈၉၃ မှ ၉၂၇ အထိရှေ့ဆောင် Tsar Simeon I လက်အောက်သို့လွှဲပြောင်းရယူနိုင်သည်။ ဤအချိန်ကိုဘူလ်ဂေးရီးယား၏ရွှေခေတ်ဟုခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်အောင်မြင်မှု၊ လက်မှုလက်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျောင်းနှင့်စာရေးခြင်းကာလဖြစ်သည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် domains များသည်လာမည့်နှစ် ၁၀၀၀ အတွင်းဘူလ်ဂေးရီးယားကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောကြောင့်မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ဤအချိန်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာမသွားနိုင်ခဲ့ပါ။ ပထမ ဦး ဆုံး ၁၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဘိုင်ဇင်တိုင်းအင်ပါယာပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားများသည်ဘိုင်ဇင်တိုင်းများနောက်သို့တွန်းပို့လိမ့်မည်ဟုဆိုသော်လည်းမွန်ဂိုများသည်မကြာမီပေါ်တိုမန်အင်ပါယာ၏ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ အော်တိုမန်အင်ပါယာသည်နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်များအလယ်ပိုင်းအထိအော့တိုမန်များမှလွတ်မြောက်မှုကိုမချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ နောက်ပြီးဘော်လ်ကန်စစ်ပွဲတွေ၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်ဘူဂေးရီးယားသည်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံနှင့်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ဂြိုဟ်တုတစ်စင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ၁၉၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနောက်ဆုံးဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲမှုနှင့်အတူဘူလ်ဂေးရီးယားသည်ဘဏ္battာရေးတိုက်ပွဲများနှင့်လူမှုရေးမငြိမ်မသက်မှုများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၇၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင်ဘူလ်ဂေးရီးယားသည်ဥရောပသမဂ္ဂမှလူတစ် ဦး အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးဘူလ်ဂေးရီးယားကိုလျင်မြန်စွာစက်မှုထွန်းကားခြင်းနှင့်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ပြိုလဲခြင်းကြောင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲကြောင့်ဘူဂေးရီးယားယဉ်ကျေးမှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်လောက်တွင်တန်ဖိုးထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များမြင့်တက်သွားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ချဲ့ထွင်မှုမြင့်တက်လာပြီးသပိတ်မှောက်မှုများသည်ပိုမိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ပုဂ္ဂလိကofရိယာ၏ကြီးထွားလာသောဝေဒနာများနှင့်ကြီးမားသောရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောတာ ၀ န်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်လိုအပ်သောပြင်းထန်သောငွေကြေးဆိုင်ရာအမိန့်များသည်လည်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှုများနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုလျော့နည်းစေခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ဘူဂေးရီးယားအစိုးရသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေကြေးဖောင်ဒေးရှင်းများ၏အကူအညီဖြင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာမှီခိုအားထားမှုကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ငွေဘုတ်အဖွဲ့၏တင်ပြချက်နှင့်အပြောင်းအလဲမတူခြင်းတို့ကြောင့်ဆယ်စုနှစ်မကုန်မီရောင်ရမ်းမှုသိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ ၂၁ ရာစုအစတွင်ပြည်သူပိုင်အာဏာပိုင်များကအစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းများအားအတင်းအကျပ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်ဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သောဘူဂေးရီးယားစီးပွားရေးသည်အထူးသဖြင့်တိုးတက်ခဲ့သည် (၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ဥရောပသမဂ္ဂတွင်အပြည့်အဝပါ ၀ င်လာခြင်းကြောင့်အကူအညီပေးခဲ့သည်) ။ ရာစုနှစ်သစ်၏အဓိကဆယ်စုနှစ်အတွင်းစုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်သည်ပုံမှန်နှစ်စဉ် ၄ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုသောပုံမှန်နှုန်းဖြင့်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အများပြည်သူ ၀ င်ငွေ၏ ၁၀ ပုံ ၁ ပုံ၏တိုတောင်းသောအတွက်လယ်ယာမြေမှတ်တမ်းများ။ Oat သီးနှံများကိုစိုက်ပျိုးမြေ၏ငါးပုံသုံးပုံခန့်တွင်စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဂျုံသည်ပြောင်းဖူး (ပြောင်းဖူး) နှင့်ဂျုံစပါးတို့ဖြင့်အဓိကကျသည်။ ကောက်, Oats, ပဲပုပ်နှင့်ဆန်ဒါ့အပြင်တီထွင်နေကြသည်။ ဆေးရွက်ကြီးသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအရှေ့တိုင်းမျိုးဖြစ်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသတွင်အများဆုံးဖြည့်တင်းထားသောအထူးသဖြင့်ခေတ်သစ်ရိတ်သိမ်းမှုဖြစ်သည်။ အစိုးရပိုင်ဆေးရွက်ကြီးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Bulgartabac ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ရုရှားကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ နေကြာစေ့သည်အဓိကဆီထွက်သီးနှံဖြစ်သည်။ ဆီကိုထုတ်ယူပြီးနောက် mash ကိုနွားအစာကျွေးသည်။ သကြား beets နှင့်ဆင်တူနေကြာပန်းသည်မြောက်ဘက်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဘူဂေးရီးယားသည်စပျစ်သီးနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးများကိုအဓိကတင်ပို့သည့်နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ စတီယာရင်၊ သိုး၊ ဝက်နှင့်ကြက်၊ Ranger ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည်ဟက်တာ ၄၀၀၀,၀၀၀ နီးပါး (မြေအကျယ်အဝန်း ၉,၉၀၀,၀၀၀) အားအခိုင်အမာဆိုထားသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင်အသုံးဝင်သောတိုးတက်မှုတစ်ခု။ စစ်အပြီးတွင်ဆိုဗီယက် kolkhozy ၏ဒီဇိုင်းတွင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောမွေးမြူရေးခြံများကိုအများဆုံးစိုက်ပျိုးမြေပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောပြည်နယ်သည်နောက်ပိုင်းတွင်ကြီးမားသောပြည်နယ်နှင့်စုပေါင်းယူနစ်များသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤရွေ့ကားဒါ့အပြင်စက်ရုပ်, ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပြသ၏ညှိနှိုင်းမူဘောင်အမြတ်ထုတ် agro- စက်မှုအဆောက်အ ဦး များဟုခေါ်တွင်အများကြီးပိုကြီးအုပ်စုများသို့ 10-2011 ခုနှစ်တွင်ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။
ဘူဂေးရီးယားသည်အလယ်အလတ်ထူးခြားသည်၊ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရကျောက်မီးသွေးဖောင် ၄၀ ခန့်ကိုခွဲခြားထားပါတယ်။ အဲဒီမှာတန် ၃ ဘီလီယံနီးပါးတန်ပြန်တဲ့ပြန်လည်သိုလှောင်နိုင်တဲ့စတိုးဆိုင်များပါရှိသည်။ စတိုးဆိုင်၏ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အရာအားလုံး lignite ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံသတ္တုတူးဖော်ရေးဇုန်များသည်ဆိုဖီယာ၏အနောက်တောင်ဘက် Pernik ပန်းကန်၊ Maritsa ပန်းကန် (Stara Zagora ၏တောင်ဘက်နှင့်နောက်ထပ်အနောက်တောင်ဘက်၊ Dimitrovgrad တွင်) နှင့်အနောက်မြောက်တွင် Danube ရှိ Lom တွင်ရှိသည်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကျောက်မီးသွေးနှင့်ကျောက်မီးသွေးများသည်နိုင်ငံ၏နွေးထွေးသောအင်အားသုံးစက်ရုံများကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာအတွက်လောင်စာနှင့်ရေနံစိမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ဘူဂေးရီးယားတွင် anthracite နှင့် bituminous ကျောက်မီးသွေးသိုလှောင်ရုံများကုန်ခန်းလုနီးပါးရှိနေသော်လည်း Dobruja ခရိုင်ရှိအရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်မှောင်မိုက်သော coking ကျောက်မီးသွေးစတိုးဆိုင်များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အကြီးမားဆုံးသောငွေစုငွေသည်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးသတ္တုထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ၏နေရာဖြစ်သောကရင်ဗစ်တီတီရှိဆိုဖီယာနှင့်နီးစပ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အနည်းငယ်မျှသာသောသံဓာတ်ပါဝင်မှုပမာဏကိုအနောက်မြောက် (Montana (ယခင် Mikhaylovgrad))၊ focal area (Troyan) နှင့်အရှေ့တောင် (Yambol) တို့တွင်တူးဖော်ရရှိသည်။ Rhodope, Balkan နှင့် Sredna တောင်တန်းများတွင်သံမဏိအမြောက်အများ (ကြေးနီ၊ ခဲနှင့်သွပ်) များစွာသိုလှောင်ထားရှိသည်။
ကျောက်၊ ဆား၊ ဂျစ်စတမ်၊ ထုံးကျောက်၊ Dolomite, kaolin (china ရွှံ့၊ asbestos) နှင့် barite အပါအ ၀ င်သိသိသာသာနည်းသောတွင်းထွက်ပစ္စည်းများတွင်ဘူလ်ဂေးရီးယားသည်ပေါများသည်။ နိုင်ငံတွင်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်ရုံမျှသာရှိသော်လည်းပင်လယ်နက်၏ပင်လယ်ရေကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကြောင့်စတိုးဆိုင်သစ်များရိတ်သိမ်းလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားသည်ရေနံဓာတ်ငွေ့ထောက်ပံ့ရန်အတွက်ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်မူတည်သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယား၏စွမ်းအင်တစ်ဝက်ခန့်ကိုတင်သွင်းသည်။ ကျောက်မီးသွေးနှင့်အနုမြူစွမ်းအင်များသည်စုစုပေါင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု၏ဆယ်ပုံတစ်ပုံနီးပါးကိုရရှိရန်အလားတူစုပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံတွင်းရှိစွမ်းအင်၏သိသာထင်ရှားသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်မှာ Marima lignite လယ်ကွင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Dimitrovgrad နှင့် Maritsa-Iztok ရှိကြီးမားသောအပူစွမ်းအင်စက်ရုံများကိုလောင်စာပေးသည်။ ဆိုနီယာ၊ ပလိုဗစ်ဒစ်နှင့်ဘာဂတ်စ်တို့တွင်နွေးထွေးသောအင်အားသုံးစက်ရုံများရှိသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယား၏တစ်ခုတည်းသောအနုမြူစွမ်းအင်စက်ရုံ Kozloduy ကိုဆိုဗီယက်လမ်းညွှန်ဖြင့်တီထွင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ တွင်ထိုတွင်အဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို ၂ ခုပိတ်ထားပြီး၊ ၂ ခုကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်အီးယူတိုးမြှင့်မှုအဖြစ်ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။
Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အခမဲ့အတိုင်ပင်ခံ၊ Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယားကိုရယူပါ၊ Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယားကိုရယူပါ၊ Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယားကိုလျှောက်ထား, အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယားလျှောက်ထားခြင်း, Portfolio Management လိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရရှိခြင်း၊ ဘူဂေးရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရယူခြင်း၊ ဘူဂေးရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဘူဂေးရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ Portfolio Management Licensing Bulgaria၊ Portfolio Management လိုင်စင်ဘူဂေးရီးယား၊ Portfolio Management လိုင်စင်ဘူဂေးရီးယားလျှောက်ထား၊ Portfolio Management လိုင်စင်ဘူဂေးရီးယား, Portfolio Management လိုင်စင်ဘူဂေးရီးယား, Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယားလျှောက်ထား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယား, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထား, ဘူလ်ဂေးရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထား, လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယား, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယားလျှောက်ထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယား, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယားရယူ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယား, လိုင်စင်ရယူ , ဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်ရ, ဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်လျှောက်ထား, ဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်လျှောက်ထား, ဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်လျှောက်ထား, ဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်။
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိ Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့သည်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိ Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အခမဲ့အကြံပေးသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဆက်လက်မလုပ်ကိုင်မီလုံ့လဝီရိယရှိရှိ၊ KYC နှင့်သင့်လျော်သောအကဲဖြတ်မှုကိုပြုလုပ်ပါ။
လိုင်စင်ချခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် Portfolio Management License ဘူဂေးရီးယားအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ဘူလ်ဂေးရီးယားဘဏ္Financialာရေးစည်းမျဉ်းကော်မရှင်သည်အမျိုးမျိုးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ရန်လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီတစ်ခုလိုအပ်သည်။ လျှောက်ထားသူတစ် ဦး ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတိုင်းအတာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောလိုင်စင်လိုအပ်ချက်များသည်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်။
အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရသူများသည်ဖောက်သည်များ၏ကိုယ်စားအမိန့်များရယူရန်နှင့်ထုတ်လွှင့်ရန်၊ အရောင်းအ ၀ ယ်များ၏နိဂုံးကိုကြားဝင်ဖြန်ဖြေရန်၊
ပညာရေးဆိုင်ရာသမိုင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ in နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်သန့်ရှင်းသောရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများအရလျှောက်ထားသူကုမ္ပဏီ၏အရာရှိများသည်“ မသင့်လျော်သော” လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာရမည်။ လျှောက်ထားသူသည်ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အပြည့်အဝလည်ပတ်မှုပုံစံဖြင့်လုံလောက်သောတည်ရှိမှုကိုပြသရမည် လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်အတွက်ဒေသရုံးနှင့်ဒေသခံ ၀ န်ထမ်းများခန့်ထားခြင်း။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်နိုင်ငံခြားသားများမှအပြည့်အ ၀ ပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီတွင်းရှိဒေသခံ ၀ န်ထမ်းအရေအတွက်သည်ပြည်တွင်းမဟုတ်သော ၀ န်ထမ်းအရေအတွက်ထက်များနေရမည်။ (Incl ။ ဒါရိုက်တာများ) ။
ပုံမှန်အားဖြင့် FSC သည်လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သို့မဟုတ်လက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန်အတွက် ၃ လကြာသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်နှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလူသိများတဲ့ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုငှားရမ်းသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလိုင်စင်ရရှိရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်သောအားထုတ်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အားကိုးနိုင်သည် သင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ဘူလ်ဂေးရီးယားက“ မင်းတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာငါတို့ထက်ငွေရေးကြေးရေးထက်ပိုအရေးကြီးတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကဆက်ဆံရေးကိုရတယ်၊ ငွေကအလိုအလျောက်လိုက်တာ။ ငါတို့အားလုံးဝင်ငွေရကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သင်နဲ့ငါတို့ဖောက်သည်တွေကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အများအပြားထပ် client များနှင့်ရည်ညွှန်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘူဂေးရီးယား Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဈေးကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘူဂေးရီးယား Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောလိုင်စင်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဘူလ်ဂေးရီးယားအားနံပါတ် ၁ ရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘူဂေးရီးယား Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဈေးကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘူဂေးရီးယား Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယားကိုရှာဖွေနေသည့်ကုမ္ပဏီများကိုနံပါတ် ၁ ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဈေးအပေါဆုံးအကြံပေးများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ဈေးအပေါဆုံးရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အသက်သာဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ဈေးအပေါဆုံးအကြံပေးများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချထားပေးမှုအတွက်အနိမ့်ဆုံးရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချထားပေးမှုအတွက်အနိမ့်ဆုံးအကြံပေးများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အသက်သာဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား, ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးရှေ့နေများ, ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအတိုင်ပင်ခံ, ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေး, ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လိုင်စင်အတွက်စျေးအပေါဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လိုင်စင်အတွက်စျေးအပေါဆုံးရှေ့နေများ။
သိရန်လိုအပ် - ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်လိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များ
min ။ ဒါရိုက်တာနှစ် ဦး (သာလျှင်ပုဂ္ဂိုလ်များသာဖြစ်နိုင်သည်)
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရုံးခန်းတစ်ခုတွင်သက်ဆိုင်ရာပညာရေးနှင့်အတူအနည်းဆုံး ၀ န်ထမ်းသုံး ဦး ရှိသည်
ကော်ပိုရိတ် ၀ င်ငွေခွန် - ၁၀% (အီးယူတွင်အနိမ့်ဆုံးနှုန်း)
VAT –20% VAT (အီးယူ၏ပြည်တွင်းပို့ကုန်များနှင့်ပို့ကုန်များသည် VAT မှကင်းလွတ်သည်)
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ၀ င်ငွေခွန် - ၁၀%
တစ်လခန့် - လျှောက်လွှာအတွက်သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း
တစ်လခန့် - ကုမ္ပဏီရုံးနှင့်ဒေသခံရုံးနှင့်ဝန်ထမ်းများစီစဉ်ခြင်း
သုံးလ - FSC မှလျှောက်လွှာကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်
အနည်းဆုံးအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်မှာယူရို ၁၂၅၀၀၀ (ဖြစ်ပါသည်။ လိုင်စင်ပေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုအကြံပေးလိုပါသည်) ။
ကုမ္ပဏီ၏အရင်းအနှီးကိုချေးငွေမှ ရယူ၍ မရပါ။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်သင့်သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စစ်ဆေးပြီးသောဘဏ္statementsာရေးရှင်းတမ်းများနှင့်အခွန်ရှင်းတမ်းကို၎င်း၏လက်ကျန်ငွေနေ့စွဲမှ ၃ လအတွင်းဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်။
ဒေသခံဝန်ထမ်းများ - လိုအပ်တယ် (အနည်းဆုံး ၃)
ကန ဦး စိစစ်မှုအတွက် KYC မှသက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများစုဆောင်းခြင်း
သက်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြင်ဆင်ခြင်း (စီးပွားရေးအစီအစဉ်များ၊ လက်စွဲနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ)
ဒေသဆိုင်ရာရုံးခန်း၊ ဒေသခံ ၀ န်ထမ်းများစီစဉ်ပေးခြင်း
ပေးဆောင်ငွေအရင်းအနှီးသည်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည့်နေ့မှ (၁၄) ရက်အတွင်းအပြည့်အဝရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်။
Offshorelicense သည်လျှောက်လွှာပုံစံအားလုံးကိုဖြည့်ပြီးလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက် Apostille ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းရယူလိမ့်မည်။
အသေးစိတ် CV ကိုရက်စွဲနှင့်လျှောက်ထားသူကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
လက်စွဲစာအုပ်များ (OFFSHORELICENCE မှရေးဆွဲလိမ့်မည်) - ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒ၊ လုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အခြားအရာများ၊
စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်တစ် ဦး မှရရှိနိုင်လိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုရမည်။
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ငွေကြေးခဝါချခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုများအစုလိုက်အပြုံလိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်တို့ကဤကဲ့သို့သော Clients များကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
ငါတို့နောက်လိုက်တယ် FATF စည်းမျဉ်းများ Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အလွန်တင်းကြပ်စွာ။
အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူပါ.
အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယားအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လျှောက်ထား ဘူဂေးရီးယားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်န်ဆောင်မှုကိုဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်သုံးပါ။
Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက် Portfolio Management လိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသူများသည်ဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်မည်သည့်တရားမဝင်၊ အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဆည်းပူး ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်။
အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကို EU နှင့် Offshore Portfolio Management လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုဘူလ်ဂေးရီးယားရှိကမ်းလွန်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေသောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိကမ်းလွန်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူနှင့်တိရစ္ဆာန်များအားကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းအတွက်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Bulgaria`s ဖြည့်ချင်တယ် အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီသည်ဘူဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။ Bulgaria`s Portfolio Management လိုင်စင်ကိုရယူလိုက်ပါ.
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိ Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့မှုမပေးပါဘူး Bulgaria`s Portfolio Management လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ Bulgaria`s Portfolio Management လိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးမပေးပါ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရရှိရေးအတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘူလ်ဂေးရီးယားကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ, ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရယူပါ.
အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအတွက်လိုင်စင်ချထားပေးခြင်းအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်ချထားပေးခြင်း
အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယားသည်တရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထားမှုကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရယူခြင်း ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်။
အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက် Genetic ပစ္စည်းများကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရရှိရေးအတွက်အကူအညီလိုသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ချထားပေးခြင်းအတွက် EU နှင့် Offshore Investment Fund မှလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုဘူလ်ဂေးရီးယားရှိကမ်းလွန်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေသောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဘူဂေးရီးယားလိုင်စင်ရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေရှိကမ်းလွန်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကြံပေးသူများကပေးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များအားကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မည်သည့်အတွက်မဆိုရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Bulgaria`s ဖြည့်ချင်တယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့မှုမပေးပါ ဘူဂေးရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအတွက်လိုင်စင်ချထားပေးခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ဘူဂေးရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ထုတ်ပေးရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မပံ့ပိုးပါ။
အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်ချခြင်းများကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူပါ.
အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုဘူဂေးရီးယား၏ခွင့်ပြုချက်ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လျှောက်ထား ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Portfolio Management Licensing Bulgaria တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Portfolio Management Licensing ၀ န်ဆောင်မှုကိုသုံးပါ။
အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချထားပေးခြင်းဆိုင်ရာအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုဘူလ်ဂေးရီးယားသည်တရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသူများအတွက်ဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။ အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဆည်းပူး ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်။
အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချထားပေးခြင်းများကိုတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိကြပါ။
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချထားပေးခြင်းနှင့်ဥရောပနှင့်ကမ်းလွန်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်းကိုဘူလ်ဂေးရီးယားရှိကမ်းလွန်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူလိုသူများ၊ အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရရှိခြင်းကိုဘူဂေးရီးယားသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Portfolio Management Licensing Bulgaria ရှိကမ်းလွန်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့ပြေးများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Bulgaria`s ဖြည့်ချင်တယ် အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဘူဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကိုအပြာစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ Bulgaria`s Portfolio Management Licensing ကိုရယူပါ.
ဘူဂေးရီးယားရှိ Portfolio Management လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေး ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချထားရေးအတွက်လျှောက်ထားပါ.
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချခြင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမဟုတ်သလို ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူခြင်း.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးမပေးပါ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းသည်ကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရယူပါ.
အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဘူဂေးရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်နည်းပညာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသည့်ဥပဒေအရအမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသောတရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားခွင့်မပြုပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ကိုရယူပါ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်။
အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောလူပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အီးယူနှင့်ကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုဘူလ်ဂေးရီးယားရှိကမ်းလွန်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေသောလူပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်တွင်ဘူဂေးရီးယားရှိကမ်းလွန်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကပေးသောဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းကုန်ပစ္စည်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းကိုလုပ်ကိုင်သူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Bulgaria`s ဖြည့်ချင်တယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါ ဘူဂေးရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခြင်း.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးအမျိုးအစားများသို့ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးမည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းများကိုဘူလ်ဂေးရီးယားသည်ကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လိုင်စင်ရ.
အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ လိုင်စင်လျှောက်ထားသည် ဘူဂေးရီးယားနှင့်ငါတို့လိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယား၌အကြှနျုပျတို့၏လိုင်စင်န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်လိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသူများသည်ဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားခွင့်မပြုပါ။ လိုင်စင်ဆည်းပူး ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်။
အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ဘူဂေးရီးယားရှိလိုင်စင်အတွက်အီးယူနှင့်ကမ်းလွန်လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုဘူလ်ဂေးရီးယားရှိကမ်းလွန်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ကမ်းလွန် Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်ရတွင်ထုတ်လုပ်ရန်၊ အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ရန်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပါအဝင်နျူကလီးယားပစ္စည်းများ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားမှလိုင်စင်အတွက်အတိုင်ပင်ခံများကပေးအပ်သောဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုတိရစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်မပြု။ နှင့် Bulgaria`s ဖြည့်ချင်တယ် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေကုမ္ပဏီသည်ဘူဂေးရီးယားတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလိုသည့်တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့လိုင်စင်အထောက်အပံ့များမပေးပါ။ ဘူဂေးရီးယားလိုင်စင်ရယူပါ.
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါ ဘူဂေးရီးယားလိုင်စင်လျှောက်ထားသည်.
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမဟုတ်သလို ဘူဂေးရီးယားလိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘူဂေးရီးယား Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူရန်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောဘဏ္orာရေးသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမပြုမီထို site အသုံးပြုသူများအားသင့်တော်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ဘူလ်ဂေးရီးယား။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် Portfolio Management လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားသောအခါဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်လိုင်စင်ဖြင့်စတင်သော်လည်းကျယ်ပြန့်သောအထောက်အပံ့ကိုပေးသော်လည်းဘူလ်ဂေးရီးယားတွင် HR အထောက်အပံ့ကိုတိုးချဲ့သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရယူခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ချထားပေးခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချပေးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ခ ulgaria၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အကောင်းဆုံးလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ ဘူဂေးရီးယား၌တည်၏။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အခြားထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် သင်၏ Portfolio Management License အပြီးဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအတိုင်ပင်ခံများသည်အထူးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။
Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အပြင်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုပြည့်စုံသောအကူအညီဖြင့်ထောက်ပံ့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုစတင်ခြင်း ဘူဂေးရီးယား၌တည်၏။
Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ဘူဂေးရီးယားတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများအခမဲ့ရယူနိုင်ရန်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ဘူဂေးရီးယားရှိအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက် Portfolio Management License ဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီပေးနေသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူပါ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရယူပါ
Investment Fund လိုင်စင်သည်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိ Portfolio Management License အတွက်ကွဲပြားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရယူခြင်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရယူပါ ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထားရန် | ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရယူပါ
အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်သည်ဘူဂေးရီးယားရှိအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပါကဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရယူခြင်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူပါ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူပါ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်သည်ဘူဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရယူခြင်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရယူပါ ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရယူပါ
လိုင်စင်သည်ဘူဂေးရီးယားရှိအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကဘူလ်ဂေးရီးယား၏လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရယူခြင်းတို့တွင်သင်တို့ကိုဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လိုင်စင်ရယူပါ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်လိုင်စင်လျှောက်ထားပါ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်လိုင်စင်ရယူပါ
ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်သင်သည်ရူပဗေဒနှင့်ကိုက်ညီပြီးရိုးရှင်းသောစီးပွားရေးပုံစံရှိရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားမှရှေ့နေများသည်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရရှိနိုင်ပါကဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုသင်ကူညီနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ , ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက်သင့်တော်သောဈေးနှုန်းဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချထားပေးခြင်းများကိုသင်ရရှိနိုင်သည့်အတိုင်းအတာနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ဘူဂေးရီးယားရှိအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချထားပေးခြင်း၊ ဘူဂေးရီးယားရှိ Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုသင်ကူညီနိုင်သည်။ , ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှအခကြေးငွေမှာဘူလ်ဂေးရီးယား၏အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။
ဘူဂေးရီးယား၌သင်တို့၏ Portfolio Management လိုင်စင်ရယူပါ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိသင်၏အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူပါ
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ , ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်သင့်တော်သောဈေးနှုန်းဖြင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
ဘူဂေးရီးယားလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သောလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဘူဂေးရီးယားလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ သင်တတ်နိုင်သမျှအခကြေးငွေမှာဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။
မင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဘူလ်ဂေးရီးယား | မင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဘူလ်ဂေးရီးယားမှာရယူပါ
ဘူဂေးရီးယား၌သင်တို့၏ Portfolio Management လိုင်စင်ကိုရယူပါ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိသင်၏ Portfolio Management လိုင်စင်ကိုရယူပါ
ဘူဂေးရီးယား Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုရရှိရန်သင်သည်ရူပဗေဒနှင့်ကိုက်ညီပြီးရိုးရှင်းသောစီးပွားရေးပုံစံရှိရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားမှရှေ့နေများသည်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိ Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဘူဂေးရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရရှိခြင်းနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းများကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချထားပေးခြင်း၊ ဘူဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချထားပေးခြင်းနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားအစိုးရ၏အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလိုင်စင်ချထားပေးခြင်းများကိုတတ်နိုင်သည့်နှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်လည်းကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်၏ Portfolio Management Licensing Bulgaria ကိုရယူပါ ဘူလ်ဂေးရီးယား၌ငါ၏အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူခြင်း
ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်ကူညီသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သောလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကိုက်ညီပါကကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေ၊ ဘူဂေးရီးယားလိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ တတ်နိုင်သမျှအခကြေးငွေမှာဘူလ်ဂေးရီးယားလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ကျွန်ုပ်၏ Portfolio Management လိုင်စင်ကိုရယူပါ ဘူလ်ဂေးရီးယား၌ငါ၏အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ရယူခြင်း
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိဘူလ်ဂေးရီးယားအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အဓိကကုန်ကျငွေအားလုံးကိုအထူးအကူအညီအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ချထားခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ချထားခြင်း ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ခ ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ချထားခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ချပေးခြင်းများ
ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချပေးခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချပေးခြင်းများ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ခ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချထားမှု၏ကုန်ကျစရိတ် | ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချပေးခြင်းများ
ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ခ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ခ ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဘူဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ခ
ဘူဂေးရီးယားရှိလိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ် | ဘူဂေးရီးယားရှိလိုင်စင်ခ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ခ ဘူဂေးရီးယားရှိလိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ် | ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လိုင်စင်ကြေး
ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေများ
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်ရရှိရေး၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အတိုင်ပင်ခံ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကြံပေးများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ထုတ်ပေးရေးအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချပေးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချပေးရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ချထားပေးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အကောင်းဆုံးလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ ထို့အပြင်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လိုင်စင်များအတွက်ရှေ့နေများလည်း။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အာဏာကိုထုတ်ပေးခြင်း၊ အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင် - ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုအာဏာပိုင် ဘူဂေးရီးယား၏